Soomaali badan oo si arxan daro ah loogu dilay deegaan ku dhaw Webiga Awash | Allbanaadir.com
Home NEWS Soomaali badan oo si arxan daro ah loogu dilay deegaan ku dhaw...
Soomaali badan oo si arxan daro ah loogu dilay deegaan ku dhaw Webiga Awash
Wararka aan ka heleyno dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dad Soomaaliyeed oo xoolo dhaqato ah lagu laayay deegaan katirsan dowlad deegaanka Canfarta sidoo kale xoolo badan ay dadkaasi wateen lagu dhacay.
Inta la xaqiijiyay todobo qof oo xoolo dhaqato Soomaali ah ayaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo Hilada Qoorka oo ku dhow Webiga Awash ee mara deegaanka Canfarta, weerarkan ayaa sidoo kale lagu dhaawacay dhoor qof oo kale.
Weerarkan dadka Soomaalida ah lagu beegsaday ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen maleeshiyaad Canfarta kasoo jeeda, waxaana xoola dhaqata Soomaaliyeed xilliga la dilayay la sheegay in wabiga Awash u aroorayeen.
Weerarkan ayaa kusoo aadaya xili ay socdeen dedaalo xal looga gaarayay colaad soo noq noqotay oo u dhaxeesay xoolo dhaqatada Soomaalida iyo kuwa Canfarta, waxaana weerarkan laga cabsi qabaa in mar kale colaad hor leh abuuro.
Previous articleTaliyaha NISA oo hawada ka saaray barihii bulshada uu lahaa iyo hadal heyn ka dhalatay !
Next articleQaar kamid ah Wefdigii Madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu karaantiilay Imaaraadka